In kasta oo ay tahay dhacdo aad dhif u ah, waxaa jira dadka qaar ayaa sheegay dhibaatooyinka ay la backlight iPhone. Waxaan dhihi waa dhif ah, sababtoo ah inta badan wararka bilaabaan leh, "Waxaan hoos my iPhone." Dhibaatada dhif dhaca iPhone oo wanaagsan. Tan micnaheedu ma aha in aysan jirin waa dad aad ugu sheegay Backlights jabay on iPhone fiican. Su'aasha wali waxa la sameeyo marka aad dareentid in aad backlight uusan si sax ah u shaqeeya.
Tallaabada ugu horreysa waa in la ogaado sababta baxay. Haddii sababta dhibaatada waxaa sabab u ah nooc ka mid ah dillaacin, laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay backlight ka go'an gacanta. Taas macnaheedu waxa weeye, in haddii aad dareentay dhibaatada ugu dhaqsaha badan ka dib markii telefoonka waa la tirtiray ama wax ku dhacay, dhibaatada la sifaynayo waa dhibaato hardware ah in la hagaajin karin. Dhinaca kale, aad iPhone ee backlight kaliya joojin kartaa shaqeeya qaab kasta oo "trauma hardware" waa in aan. Iyada oo ay tani inta badan waa dhif u dhacdo oo inta badan macnaheedu waxay noqon kartaa in aad la dhibaatada software ah wax looga qabto. Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay qaar ka mid ah dhib ka soo jeedin. Xaalado dhif ah waxaa laga yaabaa in aad xitaa u baahan tahay si aad u hesho badalay telefoonka aad hoos heshiis damaanad aad.
Sida loo Hubi Backlight ee dhaawac
First of dhan tilmaame ugu weyn in aad qabto dhibaato waa marka aad iPhone ee backlight fudud ma shaqeyn doonaan. Tani waa tilmaanta ugu waaweyn inkastoo mararka qaar, aad backlight la jebin karo oo aan muujin tan "calaamad." Sidaas waxa calaamadaha kale in ay isha ku hay si aad u in la qiimeeyo burburka si aad backlight? Halkan waxaa ah calaamadaha yar si ay u daawato baxay;
• Mararka qaarkood aad backlight noqon kartaa ayay u hoosaysaa, waxa kaliya ee aad ka arki kartaa shaashadda haddii aad u qaban iftiinka toos ah. Tani waa calaamad cad in backlight hallaabo
• aad dareen horreysa ay ahaan lahayd si aad u hubiso goobaha. Haddii aad qabsato goobaha aad iyo aad backlight weli ma dhalaalaya ku filan, ka dibna aad qabto dhibaato.
• Haddii backlight mararka qaar ka dibna mararka qaar ka shaqeeyaa waa si buuxda u soo baxday, in aad leedahay dhibaato ah oo u baahan in wax laga qabto
• Haddii aad isku dayday farsamo dhib kasta kitaabkii iyo screen weli mugdi ah, waxaad u baahan tahay caawimaad.
Waxaad u baahan tahay xal waara dhibaatada. Taas macnaheedu waxa weeye adiga u baahan si uu u xaliyo backlight jabtay aad iskaa ah ama aad u baahan tahay inaad bixiso si aad u qof kuu sameeyo.
Dayactirka Backlight Broken
Ma aha oo gebi ahaanba suurtagal noqon waayaan backlight aad jebiyey keligaa. Dhab ahaantii aad samayn karto si aad u fudud ka dib markii ay talaabooyin fudud ee hoose.
1. Tallaabada ugu horreysa waa in la hubiyo in aad iPhone waxaa ku shaqeeya off ka hor inta disassembling
2. Riix guddi danbe ee telefoonka cidhifka sare ee telefoonka inaad ka saartid
3. Waxaad markaa u baahan tahay in ay ka saarto fur in heshay isku xira batari guddiga macquulka ah. Daydo iPhone Qaar ka mid ah wax ka badan hal fur. Haddii tani ay tahay kiiska ka saari u tabaaxay
4. Pry Xire Battery kor u ka godka on board macquulka ah oo isticmaalaya qalab furitaanka caag ah
5. Markaas si tartiib ah batteriga ka telefoonka kor u
6. Tallaabada xigta waa in tuurid SIM ka haysta. Tani waxay u baahan tahay waxaa laga yaabaa in xoogaa yar oo ka tirsan ciidanka
7. Pry isku xira hoose anteeno off guddiga macquulka ah
8. Waxaad hadda ka saari kara fur xira hoose ee guddiga macquulka ah inay kiiska gudaha
9. Tallaabada xigta waa in ay ka saarto u tabaaxay ku xidha anteeno Wi-Fi guddiga macquulka ah oo si taxadar leh kor ka ah guddiga
10. Waa in aad si taxadar leh ka dibna isku xira ee camera gadaal kor ka ah guddiga
11. Waxa kale oo aad u baahan tahay in cable ee digitizer, LCD Cable, Jack Headphone, Top Microphone iyo cable Camera Front kor.
12. aad ka iPhone soo saaro guddiga macquulka ah
13. ka phone saar afhayeenka iyo markaas labada boolal haysta gariiriye in ay jir gudaha
14. Ka dibna iska saar boolal dhinaca button (laayeen) ee iPhone
15. boolal saar dhinaca SIM-
16. Marka dhan boolal ayaa laga saaray, kor u yeelay qarkii ugu sareysa shirka guddiga hore
17. ka shaashadda saar bandhigay
18. waa in ay awoodaan in ay arkaan inta uu la egyahay khasaaraha ay ka mid caag ah oo keenaya in aad leedahay backlight ah darnaayeen ama jiritaan la'aanta Waxaad noqon.
19. Waxaad hadda si fudud u badali karo mid cusub iyo dib-u-soo shirin telefoonka
Eeg, aad si fudud u raaci karto tallaabooyinka kor ku xusan si aad u hesho backlight dib. Laakiin taas oo keliya la sameeyo haddii aad hubto in dhibaatadu ay tahay hardware la xiriira.
> Resource > iPhone > Sidee Dayactirka iPhone Backlight